ခွန်ဆာ - ဝီကီပီးဒီးယား
တောတွင်း ဌာနချုပ်တွင် တွေ့ရသော ခွန်ဆာ (ဧပြီ ၁၉၈၈)
၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၃၄
လိုင်မော်၊ မိုင်းရယ်၊ ဗြိတိသျှဘားမား
အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇(2007-10-26) (အသက် ၇၃)
ခွန်ဆာ (တရုတ်: 張奇夫; ပင်ရင်: Zhāng Qífú; ထိုင်း: จันทร์ จางตระกูล; RTGS: Chan Changtrakul; ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၃၄ – ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၇)၊ သည် ရှမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ခွန်ဆာသည် ရှမ်း တရုတ် ကပြားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရထံ၌ လက်နက်မချမီ အချိန်အထိ အင်အား ၁၅,၀၀၀ ခန့်ရှိ ကိုယ်ပိုင် စစ်တပ်ဖြင့် ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအိုနယ်စပ် ရွှေတြိဂံဒေသကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သည်။
ခွန်ဆာကို တောင်သိန္နီစော်ဘွားနယ် (ယခု တန့်ယန်းမြို့နယ်) လွိုင်မော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာဖိန့်ရွာနေ တရုတ်လူမျိုး ဖခင် ခွန်အိုက် (Zhang Bingyao) နှင့် ရှမ်းလူမျိုး မိခင် နန်းဆိုင်ဇွန် တို့မှ ၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွင် မွေးဖွားသည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရက ဖမ်းဆီး၍ မန္တလေးထောင်၌ ထိန်းသိမ်းရာ သူ၏တပ်က တောပြန်ခိုသွားသည်။ ခွန်ဆာ၏လက်ထောက် တပ်မှူးဖြစ်သူက တောင်ကြီးမြို့၊ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံတွင် လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရုရှားဆရာဝန် ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးကာ ခွန်ဆာနှင့်လဲလှယ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သဖြင့် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လွတ်လာသည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် စဝ်ကွဏ်းဇိန်း (ခ) မိုးဟိန်း ဦးဆောင်သည့် ရှမ်းတော်လှန်ရေးကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းပြီး စဝ်ကွန်းဇိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခွန်ဆာက ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူကြသည်။ ဟိုမိန်းဌာနချုပ်ကို တည်ထောင်ကာ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းတခွင်နှင့် ရှမ်း - ကယား နယ်စပ် အထိ ထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် စဝ်ကွန်းဇိန်းကွယ်လွန်ရာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။ ထိုနောက် အမ်တီအေ ခေါ် မုန်တိုင်းတပ်မတော် (Mong Tai Army) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထိုင်း - မြန်မာ - လာအို နယ်စပ် ရှိ ရွှေတြိဂံဒေသတွင် ဘိန်းဖြူ အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်ခဲ့သဖြင့် ဘိန်းဘုရင်ဘွဲ့ဖြင့် ထင်ရှား လာခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းမှ မြန်မာ သို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာခဲ့သော ဩစတြေးလျ သတင်းထောက် စတီဖင်ရိုက် နှင့် အင်တာဗျူးခဲ့ပြီး ဘိန်းစိုက်ခင်းများ မစိုက်ပျိုးစေရန် တနှစ်လျှင် ဩစတြေးလျှဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ဖြင့် နောက် ၈ နှစ် အတွက် ရောင်းမည်ဟု ဩစတြေးလျ အစိုးရသို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထို ကမ်းလှမ်းချက် ကို လွှတ်တော်အမတ် ဂရက်အီဗင် က "အစိုးရသည် ဒုစရိုက်သမားများ ဒုစရိုက်မှု မလုပ်ခြင်းအတွက် ငွေပေးစရာ မလို" ဟု ကြေညာပြီး ဩစတြေးလျအစိုးရက ပယ်ချခဲ့သည်။ 
ခွန်ဆာအား အမေရိကန်နိုင်ငံက ဆုကြေး ဒေါ်လာ (၂) သန်း ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သော်လည်း ဖမ်းဆီးပေးပို့ရေးကို မြန်မာ စစ်အစိုးရက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ဦးခွန်ဆာသည် "အမေရိကန် အစိုးရလက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း မခံရနိုင်" ဟူသော ယုံကြည်ချက်ဖြင့် မြန်မာအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမ်တီအေဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးအား ကိုးကား၍ ခွန်ဆာ ဦးဆောင်သော အမ်တီအေအဖွဲ့ ဘာ ကြောင့် လက်နက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ရသလဲ ဟူသည့် စာအုပ်ကို မြန်မာအစိုးရက မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၂၀၀၇ အောက်တိုဘာ ၂၆ တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆီးချို၊ လေတပိုင်းဖြတ်ခြင်း နှင့် သွေးတိုး ရောဂါများ ခံစားနေရပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။  ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဥက္ကလာပ ရှိ ရေဝေးသုသာန်တွင် မြုပ်နှံခဲ့သည်။ 
မင်းသား ရစ်ယန်း က ၂၀၀၇ ခုနှစ် ထွက် အမေရိကန်လူဆိုး အမည်ရှိ ရုပ်ရှင်တွင် ခွန်ဆာအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Khun Sa: Opium Warlord (documentary) – YouTube
↑ "Khun Sa's Decline (坤萨的没落)" (in Chinese)၊ China Central Television၊ 2002-06-18။ 2006-12-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ปิดตำนานขุนส่า ราชายาเสพติดโลก คนใกล้ชิดงงสาเหตุการตาย
↑ Former Notorious Druglord Khun Sa Dies, Associated Press via Google News; retrieved 2007-10-30 Archived November 2, 2007, at the Wayback Machine.
↑ Federal Register/Vol. 65, No. 233/Monday, December 4, 2000/Rules and Regulations Vol. 65,No. 233 Archived 20 February 2012 at the Wayback Machine., December 4, 2000
↑ ခွန်းဆေ (၂၀၁၆) "ကျနော်သူပုန်ဖြစ်လာပုံ"၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ သုတေသနအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်။
↑ Questions Without Notice - Khun Sa: Heroin Supply။ Senate Hansard (26 April 1988)။
↑ ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာ
↑ Khun Sa (1933-2007). Find A Grave Memorial.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခွန်ဆာ&oldid=701404" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။